नेपालमा आईरनमेन ल्याउने काे हुन जाेसिला यूवा ? कहिले आउदैछ ! « Light Nepal
Published On : 19 May, 2019 4:39 pm
दमक झापा । नेपालकै एक युवाले आईरनमेन सुट तयार गर्दैछन र उक्त सुट चाँडैंनै नेपालमा सार्वजनिक गरिने भएको छ । गौरादहका एक युवा ५ महिनादेखि फलामको मान्छे अर्थात आईरनमेन बनाउने प्रयासमा लागिरहेका छन । गौरादह-२ का २३ वर्षिय सुमन माझीले उक्त आईरनमेन (फलामको मान्छे)काे सुटकाे डिजाइन तयार पारी सकेका छन र चाँडैं सार्वजनिक गर्ने अनलाईन ताजा खबर सँगको अन्तरवार्तामा उनले जानकारी दिएका छन।
पेशाले उनी दमक उपभोक्ता सहकारीमा बजार ब्यावस्थापक रहेका छन भने क्याम्स तहमा व्यवस्थापन संकायमा अध्यन गरीरहेका छन । गाैरादहमा जन्मेका उनी विगत २ र्बष देखि दमकमा वसोवास गर्छन। व्यवस्थापन संकाय पढे पनि सानै देखि केही नयाँ काम गर्ने चाहानाले यो काम थालेको सुमन बताउँछन । यो सुटकाे डिजाईन कम्फर्टेबल(आरामदायी) तरीकाले गरीएको छ जसले गर्दा आफ्नो शरीरमा लगाउन सजिलो, हिडडुल गर्नका साथै उठबस गर्न पनि यसले कुनै अफ्ठाराे नहुने सुमन बताउँछन । यो एउटा सुरक्षा कवच हो,यो खासगरी लडाई, युद्ध तथा कुनै पनि र्दुघटनाबाट जोगिन उपयोगी हुने उनी बताउँछन । प्याटन पेपरमा यसको डिजाईन गरेर धातुको पाता काटी यसको विभिन्न र्पाटहरु तयार गरीएको छ ।अहिले बनाईएको आईरनमेन सुट प्रर्दशन नमुनाको रुपमा गरीने छ ।
सरकारले सहयोग तथा स्विकृति दिए गोलीले समेत छेडन नसक्ने गरिको कवच बनाउन सकिने उनको भनाई छ । यो सुट खासगरी नेपाली जनताको सुरक्षाको लागी बनाईएको हुनाले यसको गरिमालाई बूझेर सम्पुर्ण नेपाली जनताहरुबाट र सरकारी तहबाट सहयोगको अपेक्षा राखको उनी बताँउछन। यसको निर्माण कार्य अहिले झापाकाे दमकमा भईरहेको छ। अब २ सातामा यो काम पुरा गरि र्सावजनिक प्रदशनि गर्ने लक्ष्यमा उनी रहेका छन । बिभिन्न बिदेशी फिल्महरुमा देखिने गरेको यस्तो धातुको लुगा सैन्य क्षेत्रका लागी बढि उपयोगी हुने उनी बताउँछन ।
सरकारले सहयोग र स्विकृति दिए गोलीले समेत छेडन नसक्ने यस प्रकारको कवच बनाउन सकिने उनको भनाई छ । विशेष प्रकारको कागजमा डिजाईन गरेर सोही प्रकारले धातुको पाता काटी अंगहरु जोडने क्रम जारी रहेको सुमनले बताए । रातो र पँहेलो रंगमा आर्कषक ढंगबाट तयार पारि यसको चाडै र्सावजनिक गर्ने भन्दै उनले अघि नेपालमा कसैले पनि यसप्रकारको आईरन मेन नबनाएको दाबी समेत गरेका छन ।
हेर्नुहोस पुरा अन्तरवार्ता भिडियाेः